TAMBAJOTRAN’NY VEHIVAVY MPITARIKA: Miray feo amin’ny fampiofanana ny vehivavy mba hananany fahaleovantena – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 2:45
Ny vadin'ny Filoha no nitarika ny fotoana.
Accueil/Songadim-baovao/TAMBAJOTRAN’NY VEHIVAVY MPITARIKA: Miray feo amin’ny fampiofanana ny vehivavy mba hananany fahaleovantena
Tontosa tetsy Alarobia ny faran’ny herinandro teo ny andro fisaintsainana niarahana tamin’ny tambajotran’ireo vehivavy mpitarika afrikanina eto Madagasikara. Nitarika ny lanonana ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika, Mialy Rajoelina, teo koa ny Filohan’ny Antenimieram-pirenena, ireo Minisitra vehivavy mandrafitra ny Governemanta, ireo vehivavy mpitantana orinasa sy Parlemantera, sy ny sisa hafa koa.
Lucien R. 6 décembre 2021
“Tena laharam-pahamehana ny hanasongadinana ny vehivavy anatin’ny dingan’ny fampandrosoana, sy ny fampandrosoana maharitra”, hoy ny Vadin’ny Filoham-pirenena, Mialy Rajoelina, ny sabotsy, nandritra ny lahateniny tao anatin’ny andro fisaintsaina nokarakarain’ny tambajotran’ny Vehivavy mpitarika afrikanina eto Madagasikara. Ity farany izay rafitra napetraky ny firenena mikambana tamin’ny taona 2017, hivondronan’ireo vehivavy mpitarika malagasy isan-tsokajiny. Tafiditra ao anatin’izany ny vadin’ny Filohan’ny Repoblika, ireo Filohana Andrimpanjakana, ireo Minisitra vehivavy mpikamban’ny Governenamanta, ireo vehivavy parlemantera, ireo vehivavy mpitantana orinasa, ireo vehivavy mpitarika fikambanana sy ny sisa koa.
Lohahevitra nosafidiana nandritra ity andro fisaintsainana nokarakaraina ny sabotsy teo ity, ny hoe “fanomezana ainga vao ara-toekarena ireo vehivavy manoloana ny fiatrehana ny Coronavirus sy ny Kere”. Nivoitra nandritra ny adihevitra rehetra nandeha ny maha zava-dehibe ny fahaleovantenan’ny Vehivavy izay antoka hahatongavana mankany amin’ny fampiroboroboana ny toekaren’ny firenena. Mba ahatongavana amin’izay fahaleovantena izay anefa, ilaina ny fanohanana, ny fampirisihana, ary indrindra ny fampiofanana ny vehivavy. Tsara marihina fa tantanan’ny vehivavy avokoa ny 19% ny tokatrano malagasy. Zava-dehibe noho izany ny fanomezan-danja ny vehivavy ho fanoitra amin’ny fampandrosoana.
“Ndao tohanana ny vehivavy malagasy”
Nandritra ny fandraisam-pitenenany, niarahaba ny vehivavy malagasy ny vadin’ny Filoha, fa na dia teo aza ny fiatrehana ny valanaretina Covid-19 sy ny fiovaovan’ny toetrandro, dia nijoro hatrany izy ireo, niezaka nioitra amin’ny fiainana. “Koa manao antso aminareo vehivavy mpitarika, ny Andrimpanjakana sy Rafitra samihafa, ny Orinasa, ny Fikambanana fa manao antso indrindra amintsika rehetra aho : Ndao tohanana ! Ndao hamporisihana ! Ndao hampiofanina ny vehivavy. Satria ny vehivavy mahavita tena no antoka ho an’ny ankohonana sambatra sy ny fiarahamonina marin-toerana, ka hanànana Firenena mandroso”, hoy ny vadin’ny Filoha.
Tsara marihina fa isan’ny hevitra nitsoaka taorian’ny sabotsy teo ny fanaovana adisisika amin’ny fanarenana ara-toekarena ho an’ny vehivavy ao anatin’ny fiatrehana ny Covid-19 sy ny Kere. Eo koa ny fanohanana ny fandraharahan’ny vehivavy sy ny fitarihan’ny vehivavy. Nivoitra ihany koa fa mila hamafisiny ny traikefa sy ny fahaiza-manaon’ny vehivavy eo amin’ny tontolon’ny indostria sy ny teknolojia vaovao. Farany, niombon-kevitra ireo vehivavy mpitarika rehetra fa hanao antso avo amin’ny Governemanta, amin’ireo mpiara-miombona antoka ara-teknika sy ara-bola, amin’ny fanohanana ny hetsika rehetra ataon’ity tambajotra ity.
LALAM-PIRENENA FAHAROA: Hisokatra ho an’ny taksibrosy sy ny fiara tsotra
FIAROVANA NY TONTOLO IAINANA : Paikady mahomby ny fampiroboroboana ny arina fandrehitra biolojika
KERE ANY ATSIMO: Nanolotra vary 8,5 taonina ireo solombavambahoaka
FOIBE FITSARANA FIARAKODIA : Hosavaina ny rosia nahavitana ny fandraisana ara-teknika